Order of importance and secularism by Misbahuddin Ramadoni 388 views
Tin hoc là mot nghanh khoa ho by Lã Văn Hải 457 views
Php mlm by phpmlmscript 114 views
Novae Case Study: Building Insuranc... by Sabrefish 309 views
PTD Consultative Workshop on Univer... by Ethical Sector 1568 views
PVA Filament by Filaments.ca by 3d printing filam... 317 views
1. မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏သက်ရောက်မှုများအားလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌာန ရန်ကုန် တွင်ပြုလုပ်သော ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်ရယူခြင်းအစီအစဉ် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ ၂၅- ၂၆-၂၇ ရက်နေ့ ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်များရယူခြင်း
2. အစီအစဉ် ၉း၀၀ စာရင်းသွင်းခြင်း နှင့် ကော်ဖီသုံးဆောင်ရန် ၉း၃၀ အခမ်းးအနား ရည်ရွယ်ချက် ၉း၄၀ SWIA လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အစီရင်ခံစာ ပုံစံ အားမိတ်ဆက်ခြင်း ၁၀း၀၀ သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ မူကြမ်းအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း ၁၀း၄၅ ကော်ဖီသုံးဆောင်ရန် ၁၁း၀၀ ကြွရောက်လာသူများမှအကြံပြုတင်ပြချက်များ တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း ၁၂း၃၀ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ် ရည်ရွယ်ချက်များ •အဓိကတွေ့ရှိချက်များသည် ဆက်စပ်မှု၊ ပြည့်စုံမှုရှိမရှိ၊ အချက်အလက်များကျန်ရှိမှုရှိမရှိ၊ မှာယွင်းစွာဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများရှိမရှိ။ •အစိုးရ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ အခြားပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်၊ အစုအဖွဲ့များအတွက် •အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အကြံပြုချက်များ ရရှိရန်။ •ရှေ့ဆက်၍ လက်ရှိတွင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နေကြသော၊ လုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ထားသော ခရီးသွာလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် စီမံကိန်ုးများအကြောင်းပြုစုရန်။
3. Chatham House rule:  ဤဆွေးနွေးပွဲ၌ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများအား ဆွေးနွေးခန်း ပြင်ပတွင် ပြန်လည် ဆွေးနွေးခြင်း မပြုရန်။  ဤဆွေးနွေးပွဲ၌ ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာများအား ကတိကဝတ်အဖြစ် မသတ်မှတ်ရန်။  အစည်းအဝေးပွဲအနှစ်ချုပ်အား MCRB ဝက်(ဘ်)ဆိုက်ပေါ်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြမည် ဖြစ်သော်လည်း ဖော်ပြသောအကြာင်းအရာများအား ဖော်ပြသူများ၏ အမည်နှင့်တကွ ဖော်ပြမည်မဟုတ်။
4. အလှူရှင် အဖွဲ့အစည်းများ • ယူကေနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန (DFID) • နော်ဝေအစိုးရ • ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရ • ဒိန်းမတအစိုးရ • နယ်သာလန်အစိုးရ • အိုင်ယာလန် www.myanmar-responsiblebusiness.org အမှတ် (၁၅) ရှမ်းရိပ်သာ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မြန်မာ။ ဖုန်း၊ ဖက်(စ်) : ၀၁ ၅၁၀၀၆၉ ထူထောင်သူများ ပို၍တာဝန်ယူမှုရှိသော စီပွားရေးအလေ့အကျင့်များ ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်အတန်းများ၊ ဒေသလိုအပ်ချက်များအပေါ်မူတည်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ တာဝန်ယူမှုရှိသော အသိပညာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စကားဝိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်အတွက် ထိရောက်သော တရားဝင် အခင်းအကျဉ်းတစ်ခု ပံ့ပိုးပေးရန်။
5. လူ့အခွင့်အရေးကို အခြေခံသည် လူ့အခွင့်အရေး ရှုထောင်၊့အမြင် ကိုအခြေခံ၍ စီမံကိန်းများ၏ သက်ရောက်မှုများ၊ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ မူဘောင်များအားလေ့လာသည်။ EIA/SIA/ESIA စီမံကိန်းများထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ပရိသတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ၊ လွှတ်တော်၊ စီးပွားရေး ၊ ရပ်ရွာဒေသ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများ။ မူဝါဒ၊ ဥပဒေများ၊ စီမံကိန်းများ၏ လိုအပ်ချက်များအား ပုံဖော်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်။ ဤကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအဆက်အစပ်၊ မူဘောင်များ၊ ဥပဒေ စာချုပ်များ (ရရှိနိုင်ပါက)၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အထများ။ ဤကဏ္ဍတွင်လူ့အခွင့်အရေးပိုမိုရရှိရန်အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မည်သည့်အကူအညီဆောင်ရွက်မှုများလိုအပ်သည်၊ မည်သည့်အဟန့်အတားများရှိသည်ကိုလေ့လာသည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည် အများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မျှဝေရန် ရည်ရွယ်သည်။ စီမံက်ိန်းအဆင့် HRIA များသည် အများနှင့်မျှဝေလေ့မရှိ။ SWIA တွေ့ရှိချက်များသည် အများပိုင်ဖြစ်စေမည်။ အများပြည်သူအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စီးပွားရေး အလေ့အထများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြစ်စေလိုသည်။ အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့်လေ့လာသည် ကဏ္ဍအပေါ် သက်ရောက်မှုများအား အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြင့်လေ့လာသည်။ ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအား ခြုံငုံလေ့လာခြင်း၊ စုပေါင်းသက်ရောက်မှု၊ စီမံကိန်းအဆင့်များ။
6.  The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (“the Guiding Principles” or “UNGP”)  Safeguard policies of international financial institutions, IFC Performance Standards and Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines The OECD Guidelines on Multinational Enterprises (which apply to companies domiciled in an OECD or MNE declaration adherent country and operating in Myanmar) The UN Global Compact: based on the same core international standards as others, but does not provide as specific guidance so less reference is made to it.
7.  မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် မကြုံဘူးသေးသော တိုးတက်မှု၊ မြင့်တက်မှုများ ရှိနေခြင်း။  နိုင်ငံအတွက် အဓိကကျသော လုပ်ငန်းကဏ္ဍဖြစ်ခြင်း။  တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းများ ရရှိနိုင်ခြင်း။  ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦး၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများ နှင့်ဆက်နွယ်နေသော မလိုလားအပ်သည့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ခြင်း။  တာဝန်ယူမှုရှိသော ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖြစ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အစိုးရ၏ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို စိတ်ဝင်တစားလေ့လာရန်။
8. ပထမအကြိမ် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု အောက်တိုဘာ - နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃ A. ရန်ကုန် B. ပုဂံ C. အင်းလေးကန် (ရှမ်းပြည်နယ်) ဒုတိယအကြိမ် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှု ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၃ - ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၄ D. မော်လမြိုင် ၊ ကျိုက်ထီးရိုး E. ငွေဆောင် ၊ ချောင်းသာ F. မန္တလေး
9. အခြားပါဝင်ပတ်သတ်သူများ  ဒေသခံများ  ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးသမားများ  အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ  သတင်းနှင့် စာနယ်ဇင်းသမားများ  နိုင်ငံရေးပါတီများ  တိုင်း၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အာဏာပိုင်များ  ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ ပြည်ထောင်စု အဆင့်တွင်  ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဋ္ဌာန  မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ မဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ ဒေသခံ ရပ်ရွာအဆင့်  တစ်ဦးချင်း အင်တာဗျူး (၂၀၀) ဦး  အဖွဲ့ငယ်များနှင့် ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း (၁၀၀) ကြိမ် အစီရင်ခံစာတွင် နေရာ၊ ကုမ္ပဏီ၊ လူအမည်များအား အမည်နှင့်တကွ တိကျုစွာဖော်ပြရေးသားခြင်း မဟုတ်။
10. လူထုရပ်ရွာ Tourism စီမံကိန်းများ ကြောင့် သက်ရောက်မှုရှိသောရပ်ရွာဒေသများ။ အကြောင်းအရာ ၁၆ ခု - ဆွေးနွေးတိုင်းပင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်၊ မြေယာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ အငြင်းပွားမှုများ၊ ပဋိပက္ခများ၊ လုံခြုံရေး၊ ကလေးအခွင့်အရေး၊အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး။ မန်နေဂျာများ Hotels & Tourism ကုမ္ပဏီများ၊ ထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းများ။ အကြောင်းအရာများ - အလုပ်အကိုင်၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ရပ်ရွာဒေသအပေါ် သက်ရောက်မှုများ၊ မြေယာစီမံမှု၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကောင်းမွန်သော စီးပွားရေး အလေ့အထများ။ Hotels & Tourism ကုမ္ပဏီများ၊ထောက်ပံ့ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသော လုပ်ငန်းများ၏ဝန်ထမ်းများ - အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမားရေး၊ ဝန်ထမ်းလုံခြုံရေး၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ။ အခြားသက်ဆိုင်သူများ - Tourism စီမံကိန်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆိုင်၍ - LNGO/ INGO/ မီဒီယာ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ကျောင်းများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ စသည်။
11.  HRIA သည် နိုင်ငံတကာတွင်ပင် စတင်အသုံးပြုနေသောနည်းလမ်းအသစ်ဖြစ်သည်။  ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးအားခြုံငုံလေ့လာသော SWIA – HRIA သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင် စမ်းသပ်မှု အသစ်ဖြစ်သည်။  HRIA ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဒေသခံသုတေသနအဖွဲ့၏အရည်အချင်း ပြည့်ဝရန်လိုသေးသည်။  နေရာ (၆) နေရာမှ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအပေါ်အခြေခံသောကြောင့် မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုယ်စားမပြုနိုင်ပါ။  နောင်အလားအလားကောင်းသော၊ စတင်မှုမပြုရသေးသောစီမံကိန်းများအစား လက်ရှိစီမံကိန်းများကိုသာ အဓိကထားလေ့လာသည်။  ထိုကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများသည် လူမျိုးစုဆိုင်ရာပရိပက္ခအရေးခင်းများ ရှိ်သောနေရာများ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။  အချိ်န်ကာလတိုတောင်းခြင်းနှင့် အချို့နေရာများတွင် အလုပ်သမားနှင့် စကားပြောဆိုခွင့် မရရှိခြင်း။  အလုပ်သမားများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ပြင်ပတွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်နည်းပါးခြင်း။
12. • ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း နှင့် နိုင်ငံတော်အခွန်ဘဏ္ဍာငွေ တိုးတက်ရေးသည် ဒေသတွင်းပဋိပက္ခလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်တွင်အပြုသဘော၊ အပျက်သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။ • ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ ဖြိုးမှု အလားအလာရှိသော ပဋိပက္ခလွန် တိုင်းရင်းသားဒေသများ (ဥပမာ - ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်) ။ • ဘေးအန္တရာယ် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း နှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများကို နှောင့်နှေးစေခြင်း ။ • လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များသည် ပစ်ခတ်မှု ရပ်ဆဲရေး နှင့် နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးမှုများ မပြီးဆုံးမီ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအား စိုးရိမ်မှုများရှိ်ခြင်း။
13. • ခရီးသွားလုပ်ငန်းအားအကြောင်းပြ၍ စစ်အင်အားဆက်လက်ချထားခြင်း။ • ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွင် စစ်တပ်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ ပို၍ အကျိုးအမြတ်ရရှိခြင်း နှင့် အခွင့်အရေးပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း။ • ခရီးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်ရေး နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ နှင့် အနှစ်သာရရှိသောဆွေးနွေးမှုများမရှိခြင်း။ • အချို့သောတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနေထိုင်ရာဒေသများတွင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း သည်၎င်းတို့အားအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်းဟုထင်မြင်သတ်မှတ်ကြခြင်း။
14. အပိုင်း (၁)
15. • စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူများနှင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း • ထိခိုက်မှုများ၊ စိုးရိမ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများ • ဒေသရပ်ရွာလူထုအပေါ် သက်ရောက်မှုများ • မြေယာ • အလုပ်အကိုင် • ကျား/မ • ကလေးအခွင့်အရေး • ယဉ်ကျေးမှု • ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေး • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ဂေဟစနစ် ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
16. စီမံကိန်းအဆင့်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများအကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြာင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
17. • စနစ်ကျသော၊ ချမှတ်ထားသော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း ပုံစံမရှိခြင်း၊ မလုံလောက်ခြင်း   ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လူထုနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းများ မရှိသလောက် နည်းပါးခြင်း။  တွေ့ရှိချက်တစ်ခုတွင် ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ဟိုတယ်ဇုန်များရှိခြင်း၏ ကောင်းကျိုး ကိုသာ လူထုနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း။  မြေယာ၏ ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်မည်သူဖြစ်သည်ကို စုံစမ်းမှုများမရှိသလောက်နည်းပါးခြင်း။  စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများနှင့် လူထုအားဆွေးနွေးခွင့် မပြုလိုခြင်း။  ပြည်သူလူထုဘက်မှ တောင်းဆိုလိုသည်မှာ….  အခြေခံအဆောက်အဦး နှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ( မီးရရှိရေး ၊ ရေရရှိရေး)  စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှု သင်တန်းများ။
18. ထိခိုက်မှုများ၊စိုးရိမ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများ >  ရပ်ရွာလူထုမှ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုလိုကြပါ။  ကုမ္ပဏီအဆင့် ထိခိုက်မှုများ၊ စိုးရိမ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများမရှိခြင်း။  တရားရုံးတွင် ပြန်လည်ကြားနားရန် အဆင့်ဆင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရခြင်း (ဗျူရိုကရေစီဆန်ခြင်း)၊ အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ငွေကြေးအကုန်အကျများခြင်း။  ငြိမ်းချမ်းစွာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူများ တရားရုံးသို့ရောက်ခြင်း။ အလေ့အထကောင်း ဥပမာများ   ပုဂံတွင် ရပ်ရွာလူထုမှ မိမိတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကြောင့် ၎င်းတို့ရပ်ရွာအပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ုတက်တက် ကြွကြွ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း။  ငွေဆောင်တွင် မြေယာသိမ်းယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဒေသအာဏာပိုင်များမှ ရွာသူရွာသားများအား ကုမ္ပဏီများနှင့်ဆွေးနွေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
19. ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ စီမံကိန်းအဆင့် သက်ရောက်မှုများ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အကျဉ်းချုပ်
20. အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ  ကောင်းကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကောင်းမွန်လာခြင်း။  အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ကုမ္ပဏီအကြီးများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း။  မြေယာဈေးနှုန်းများ၊ အစားအသောက်များ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းများ မြှင့်တက်လာခြင်း။  ဟိုတယ်ဇုန်များတည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ဒေသခံလယ်သမားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခြင်း။ အများပြည်သူနှင့် ဒေသရပ်ရွာလူထုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ   လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ သို့သော် ဒေသခံပြည်သူများနှင့် အနှစ်သာရရှိသော ဆွေးနွေးမှုများမရှိခြင်း။  ကုန်တင်ယဉ်များနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကြောင့် လမ်းများပျက်စီးခြင်း။  လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိလိုမှုများပြားခြင်း။  အညစ်အကြေးနှင့် ရေဆိုးရေညစ်များကို စွန့်ထုတ်သည့်နည်းလမ်းများ မရှိခြင်း။  ရေရရှိနိုင်မှုနည်လမ်း နည်းပါးခြင်း။
21. ဒေသခံပြည်သူများ ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်မှု   အသေးစား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ များပြားလာခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေများ ရရှိလာခြင်း။  ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုနည်းပါးခြင်း။  ဒေသခံများ ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များရရှိရန်ခက်ခဲခြင်း။  လာဘ်ယူမှု၊ ငွေတောင်းခံခြင်း (လှေများကိုစစ်ဆေးရန်၊ ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်နိုင်ရန်) ရပ်ရွာလူထု၏ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး   သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးလာမှုကြောင့် ရပ်ရွာလူထု၏ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်း။ (ဥပမာ - မီးစက်များကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေခြင်း)  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကူးဆက်ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလာနိုင်ခြေ ပိုမိုများလာခြင်း။  ပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်များအတွက် အသံဆူညံမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း (ဥပမာ - ရန်ကုန်မြို့ရှိဟိုတယ်များ) အိမ်ယာ   အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများ မြှင့်တက်လာခြင်း။  အိမ်ယာမြေဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခြင်း။ အလေ့အထကောင်း ဥပမာများ   အင်းလေးကန်တွင်ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားဧည့်သည်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသော အသက်မွေးပညာ သင်တန်းကျောင်းများ - တစိတ်တဒေသအားဖြင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့မှုများပေးခြင်း။
22. စီမံကိန်းအဆင့် သက်ရောက်မှုများ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
23. မြေသိမ်းယူခြင်းမပြုမီ ရပ်ရွာလူထုနှင့် လိုအပ်သောဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုပြုခြင်း >  လက်ရှိနှင့်အနာဂတ် စီမံကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံရပ်ရွာလူထုနှင့်လိုအပ်သောဆွေးနွေး တိုင်ပင်မှုများ မရှိခြင်း။  အချို့သော ကိစ္စများတွင် ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေသောသတင်းများဖြန့်၍ ဒေသခံလူထုအား ကိုယ်တိုင်ရောင်းချလိုစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်လာရန် ပြုလုပ်ခြင်း။  မြေယာသိမ်းယူခြင်းမပြုမီ မြေပိုင်ရှင်မည်သူဖြစ်သည်ကို အစိုးရနှင့် ကုမ္ပဏီများမှ စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်း မပြုလုပ်ခြင်း။ မြေယာရယူရာတွင် လုပ်ဆောင်သင့်သည်လုပ်ငန်းစဉ်များ>  မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု မတည်မြဲခြင်းကြောင့် ပြည်သူများမျာ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်ခြင်း။  ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲ မြေများအား အာဏာဖြင့် သိမ်းယူခြင်း။  ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ချိုးဖောက်ခြင်း။  မြေယာသိမ်းခံရမှုနှင့်ပတ်သတ်၍ တိုင်ကြားလျှင် အာဏာပိုင်များမှ တစ်ယောက်မှတစ်ယောက်သို့ လက်ဆင့်ကမ်းခြင်းကြောင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း။  အချို့သောကိစ္စများတွင် လယ်သမားများမှ တိုင်ကြားရန် ပိုမိုယုံကြည်မှုများရှိလာခြင်း။ (ဥပမာ - ငွေဆောင်) ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု နှင့် လုံခြုံရေး  လယ်ယာမြေအသိမ်းခံရမှုအား ဆန္ဒပြရာတွင်ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့မှအကြမ်းဖက်ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းခြင်း။ (အင်းလေး)
24. မြေယာ ရယူမှု ၊ အသုံးပြုမှု အတွက် လျော်ကြေးပေးဆောင်ခြင်း  မြေယာလျော်ကြေးပေးဆောင်ခြင်းအတွက် လျော်ကြေးညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခြင်း။  လျော်ကြေးလုံလောက်မှုမရရှိခြင်း နှင့် ပေါက်ဈေးအောက်နှိမ်၍ပေးလျော်ခြင်း။  မြေယာများရယူခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်ပှုပန်မှုများ၊ တင်းမာမှုများ တိုးပွားလာခြင်း။  အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနည်းလမ်းများ ဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေးပေးဆောင်မှုမရှိခြင်း။  မြေယာများကို အဓမ္မသိမ်းယူမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မကျေနပ်မှုများကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြခွင့် မရရှိခြင်း။ ကန့်ကွက်သူများကို ပဋ္ဋိပက္ခလှုံ့ဆော်သူများဟု စွပ်စွဲခြင်း။  အသိမ်းခံရသောမြေများကို အသုံးမပြုပဲ မြေကွက်လပ်များအဖြစ် ဆက်လက်ထားခြင်းနှင့် ပြန်လည် ပေးအပ်မှုမရှိခြင်း။  အများပိုင်နေရာများ ၊ရပ်ရွာပိုင်မြေနေရာများအတွက် လျော်ကြေးပေးဆောင်မှုမရှိခြင်း။ (ဥပမာ - ငွေဆောင်)
25. အလိုဆန္ဒမပါပဲ ပြန်လည်နေရာချထားမှု  မူလနေထိုင်ရာနေရာမှ ဝေးကွာသောနေရာများတွင် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း (ဥပမာ - ငွေဆောင်)။  နေထိုင်ရန်အတွက် သင့်တော်မှုမရှိသော၊ ယခင်ထက်နိမ့်ကျသောအခြေအနေတွင် ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း (ဥပမာ - ချောင်းသာ)။ မြေယာနှင့်ပတ်သတ်သော ထိခိုက်မှုများ၊စိုးရိမ်မှုများကိုဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းခြင်းနည်းလမ်းများ   မတရားသိမ်းပိုက်ခံရသော မြေယာများကို ပြန်လည်ရရှိရန် ဖြစ်နိုင်မှုနည်းပါးသည်။ ကောင်းမွန်သော အလေ့အထများ   မန္တလေးတွင် မြေယာဈေနှုန်းများ ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ဖွင့်ပညာပေးခြင်း အစီအစဉ်အား ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှဆောင်ရွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
26. စီမံကိန်းအဆင့် သက်ရောက်မှုများ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
27. လုပ်ငန်းခွင် အခြေအနေ  လုပ်ငန်းရှင်နှင့်အလုပ်သမားတို့အကြားအလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း သဘောတူညီချက် စာချုပ်များမရှိခြင်း။  အချို့သောကိစ္စများ၌ စာချုပ်များတွင်အလုပ်သမားများအား ချူပ်နှောင်ထားသောအချက်များပါဝင်ခြင်း။  ယာယီဝန်ထမ်းများအား ဧည့်သည်အများဆုံးလာရောက်သည့်ရာသီတွင်သာ အသုံးများခြင်း။  အလုပ်ရှင်များသည်တဆင့်ခံကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများမှအလုပ်သမားများ၏အခွင့်အရေးကိုသတိမမူခြင်း။  အလုပ်သမားများ ခန့်ထားရာတွင် ဘာသာရေးကို အခြေခံသော ခွဲခြားမှုများရှိနေခြင်း (မွတ်ဆလင်များအား အလုပ်ခန့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍)။ အလုပ်ချိန်၊ လုပ်ခလစာ၊ ခွင့်ရက် နှင့် အကျိုးခံစားခွင့် အချို့နေရာများတွင် သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်ထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်ရခြင်း။ အချိန်ပိုကြေးမပေးခြင်း။ အခြေခံလစာများနည်းပါးခြင်း။ ကုန်ကျစရိတ်များအား အလုပ်သမားလစာမှဖြတ်ခြင်း။ ခွင့်ရက်နှင့်ပတ်သက်၍ စနစ်တကျသတ်မှတ်မထားခြင်း။ ဝန်ထမ်းများမှ တရားမျှတသောလစာ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ သဘောပေါက်နားလည်မှု မရှိခြင်း။
28. ကျန်းမာရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ  အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနည်းလမ်းများနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် နည်းလမ်းများအားနည်းခြင်း (ဥပမာ- မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေး)။  ကျန်းမားရေး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုနည်းပါးခြင်း။  အချို့သောနေရာများတွင် အလုပ်သမားများအတွက် သန့်ရှင်းသောသောက်ရေများပေးမထားခြင်း။  တဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်များအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ မရှိခြင်း။ လွတ်လပ်စွာ အသင်းအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခွင့်၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအကြား စုပေါင်း၍ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း  အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာ ဗဟုသုတများ နည်းပါးခြင်း။  ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်ဆိုင်သောအလုပ်သမားသမဂ္ဂများ မရှိသလောက်နည်းပါးခြင်း။  အလုပ်ခွင်အခြေအနေနှင့်ပတ်သတ်၍ မကျေနပ်ချက်များအား ထုတ်ဖော်တိုင်ကြားရန် ကြောက်လန့်ခြင်း။  အလုပ်နှင့်ပတ်သတ်သောထိခိုက်မှုများ၊ စိုးရိမ်မှုများအား ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများနည်းခြင်း။ အခြားဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများအားမသိရှိကြခြင်း။
29. အလုပ်သမားများ ၏လိုအပ်ချက်များအား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း  အလုပ်သမားများအတွက်လိုအပ်သည့် နေရာထိုင်ခင်းစီစဉ်ပေးမှုအားနည်းခြင်း (ဥပမာ- ဟိုတယ်၊ သင်္ဘော)။  အလုပ်သမားအချို့၏ ပြောကြားချက်များအရ အစားအသောက်များ စီစဉ်ပေးရာတွင် ညံ့ဖျင်းခြင်း။ အတင်းအကြပ်စေခိုင်းခြင်း   သွားရောက်လေ့လာခဲ့သော မည်သည့်ကုမ္ပဏီတွင်မှ အတင်းအကြပ်စေခိုင်းခံရသော အလုပ်သမားများ မတွေ့ရှိရပါ။ သို့သော် သတ်မှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်ထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရခြင်းများကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။  လတ်တလော အတင်းအကြပ်စေခိုင်းသော အလုပ်သမား ပြဿနာ – ကျိုက်ထီးရိုးတွင် လမ်းဖောက်ခြင်း။ ကောင်းမွန်သော အလေ့အထများ အထမ်းသမားများမှ သမဂ္ဂအဖွဲ့ဖွဲ့ထားခြင်း (ကျိုက်ထီးရိုး)။ ပုဂံရှိ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများမှ လုပ်ခလစာနည်းပါးခြင်းကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားရာ ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ခလစာဆိုင်ရာ မူဝါဒချမှတ်ရန် စဉ်းစားခြင်း။
30. စီမံကိန်းအဆင့် သက်ရောက်မှုများ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
31. ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိခြင်း၊ တရားမျှတစွာ ဆက်ဆံခံရခြင်း   အမျိုးသမီးများသည် မိသားစုပိုင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ခလစာမရရှိခြင်း။  အချို့သောကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့အိမ်ထောင်ပြုလျှင် အလုပ်မှ နှုတ်ထွက်ပါမည်ဟု ကြိုတင်သဘောတူကြရခြင်း။  ဟိုတယ်အများစုတွင် မီးဖွားခွင့် (၃) လ ခွင့်ရက်ရှည်ပေးခြင်။ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး   အမျိုးသမီးဧည့်လမ်းညွှန်များသည် ဘေးအန္တရယ်ဖြစ်နိုင်သည့် အလားအလာများရှိခြင်း။  တစ်ခါတစ်ရံ၌ အမျိုးသမီးဧည့်လမ်းညွှန်များအား လိင်မှုဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးရန် တောင်းဆိုခံကြရခြင်း။  အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းများအတွက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှေင့်အယှက်ပေးမှုများမှ ကာကွယ်ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများမထားရှိခြင်း။ လိင်အပျော် ခရီးသွားလုပ်ငန်း  ခရီးသွားဧည့်သည်များမှ လိင်လုပ်သားများ ရှာပေးရန် ဧည့်လမ်းညွှန်များအား တောင်းဆိုမှုများရှိကြောင်း ဧည့်လမ်းညွှန်များမှ ပြောကြားသည်။  ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများပြားသောမြို့ပြများတွင် လိင်အပျော်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပိုမိုများပြားလာမည်ဟု ထင်မြင်ကြသော်လည်း သုတေသနအဖွဲ့မှအချက်အလက်များ ကောက်ခံရရှိခြင်းမရှိပါ။
32. စီမံကိန်းအဆင့် သက်ရောက်မှုများ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
33. ကလေးအလုပ်သမားများ နှင့် တောင်းရမ်းစားသောက်သူ ကလေးများ  ဟိုတယ်အများစုတွင် အလုပ်ခန့်ရန်အသက်အရွယ် စိစစ်ကန့်သတ်ချက်များရှိခြင်း။  အချို့သောကလေးများသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းအရာင်းဆိုင်များ၊ ပို့စကတ်ဒ်များရောင်းခြင်း နှင့် လမ်းဘေးတွင် တောင်းရမ်းခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ကျသည်။ ကလေးများဧ။်ကျန်းမာရေးနှင့် လုံခြုံရေး   ကလေးအလုပ်သမားများအတွင်း အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေနိုင်သော အလေ့အထများရှိ်ခြင်း (ဥပမာ- ကော်ရူခြင်း၊ အရက်သေစာသောက်စားခြင်း)  ကလေးအလုပ်သများအား လုံခြုံရေးဝန်းထမ်းများမှ အထက်စီးဖြင့်ဆက်ဆံခြင်း။  ဟိုတယ်ဇုန်များဆောက်လုပ်ခြင်းကြောင့် ယာဉ်များသုံးစွဲမှုပိုမိုများပြားလာခြင်းဖြင့် ကလေးများအတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်း။ ကလေးများအားအသုံးချသော လိင်အပျော်ခရီးသွားလုပ်ငန်း (Child sex tourism) >  ကွင်းဆက်လေ့လာရာတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း တဆင့်ကောက်ခံရရှိသော အချက်အလက်များနှင့် မေးမြန်းသိရှိမှုများအရ လိင်အပျော်လုပ်ငန်းများတွင် ကလေးများအား ပိုမိုတောင်းဆိုမှုရှိလာခြင်း။ အလေ့အထကောင်းများ   မြန်မာပြည်မှကုမ္ပဏီ(၇)ခုသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတွင် ကလေးသူငယ်များအား လိင်အပျော်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးချအမြတ်ထုတ်ခြင်းခံရမှုမှကာကွယ်ရန် The CODE အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည်။
34. စီမံကိန်းအဆင့် သက်ရောက်မှုများ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
35. လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဓလေ့ထုံးထမ်း အလေ့အကျင့်များ  မသင့်လျော်သော၊ လေးစားမှုမရှိသော အပြုအမူများကို ယဉ်ကျေးမှုဒေသ၊ နေရာများ၌ ခရီးသွားများ ပြုလုပ်သည်များကိုတွေ့ရခြင်း။  ခရီးသွားလုပ်ငန်းဒေသအချို့တွင် ခိုးမှုများ၊ လောင်းကစားမှုများနှင့် အရက်သေစာသောက်သုံးမှုများ ပေါများလာခြင်း။ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်  ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆိုင်ရာဒေသများ၊ နေရာများ၌ ဟိုတယ်များတည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများဖြစ်စေခြင်း။  အဆောက်အဦးဆောက်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုချက်ရယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ဆက်သွယ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုနည်းပါးခြင်း။  ရပ်ရွာဒေသများအား တွေ့မြင်နိုင်သော၊ မတွေ့မြင်နိုင်သော ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုမရှိခြင်း။ အလေ့အထကောင်းများ  ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂပညာရေး၊ သိပ္ပံနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့(UNESCO) မှမတွေ့မြင်နိုင်သော၊ ကိုင်တွယ်၍မရသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များအား မပျက်မယွင်းအောင်ထားရှိခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာမှုပြုခြင်း။  ရန်ကုန်မြို့ရှိအချို့သောခရီးသွားလုပ်ငန်းများမှ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ရိုးရာနှင့်ဆိုင်သော သင်တန်းများ ပေးခြင်း။  မြန်မာပြည်သို့လာရောက်လည်ပတ်သော နိုင်ငံခြားခရီးသွားဧည့်သည်များအတွက် “Do’s and Don’ts စာအုပ်ငယ်အား ထုတ်ဝေခြင်း။
36. စီမံကိန်းအဆင့် သက်ရောက်မှုများ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
37. ကုမ္ပဏီနှင် အများပြည်သူ လုံခြုံရေး  အများအားဖြင့် ပြည်သူလူထုနှင့်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအကြားဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အကြား ပဋိပက္ခမတွေ့ရှိရခြင်း။  သို့သော် ကုမ္ပဏီတွင်ခန့်အပ်ထားသော လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများအတွက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သင်တန်းများပို့ချမှုနည်းပါးခြင်း၊လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်သော မူဝါဒနှင့်စွမ်းဆောင်ရည် မပြည့်ဝခြင်းများတွေ့ရှိရသည်။  ကလေးအလုပ်သမားများအားလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများမှ အထက်စီးဖြင့်ဆက်ဆံမှုများ ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။
38. စီမံကိန်းအဆင့် သက်ရောက်မှုများ လေ့လာတွေ့ရှိချက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြပါအကြောင်းအရာ အချက်အလက်များသည် ကွင်းဆင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှ အဓိက အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အချို့အကြောင်းအရာများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သော နေရာ တစ်နေရာ သို့မဟုတ် နှစ်နေရာတွင်သာ တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ အချက်အလက် အသေးစိတ်အား SWIA မူကြမ်းတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
39. ရေနှင့် မိလ္လာ စနစ်များ   စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျပစ်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှုလုံလောက်စွာမရှိခြင်း။  စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် စီမံချက်များမထားရှိခြင်း။  ရေပိုက်များတွင် အမှိုက်များဖြင့်ပိတ်ဆို့နေခြင်း (ဥပမာ - ချောင်းသာ)။  လေထု၊ ရေထုညစ်ညစ်းခြင်းနှင့် ဓာတုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိခြင်း။  မိလ္လာအညစ်အကြေးများကို သန့်စင်သည့်စနစ်မရှိခြင်း။ မြေဆီလွှာနှင့် လေထု  ဒီဇယ်မီးစက်များကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။  သစ်တောများခုတ်ထွင်ခြင်းကြောင့် မြေဆီလွှာများ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ မြေတိုက်စားခြင်း (အင်းလေးပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျိုက်ထီးရိုး)။  အမှိုက်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် ယာဉ်အသွားအလာ များပြားလာခြင်းကြောင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။  စွန့်ပစ်အမှိုက်များကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ကမ်းခြေများတွင်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေသောနေရာများ အပေါ်သက်ရောက်ခြင်း  သွားရောက်သုတေသနပြုခဲ့သော စီမံကိန်းများတွင် EIA (သို့) IEE များဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း။  သဘာဝသယံဇာတများလျော့နည်းလာနိုင်သည့် အန္တရာယ်နှင့်ကြုံတွေ့လာနိုင်ခြင်း။  သဘာဝအလှတရားများ ပျက်ဆီးခြင်း (အင်းလေးကန်)။
40.  ရေများကို စနစ်တကျ သန့်စင်သောစနစ်များရှိခြင်း (မော်လမြိုင်ရှိ ဟိုတယ်တစ်ခု)။  ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသော အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်မှုစနစ်ရှိခြင်း။  အင်းလေးကန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် UNDP နှင့် Save the Children မှ မိလ္လာကန်များ ထားရှိခြင်း။  အင်းလေးဒေသတွင် ဟိုတယ်များမှ လယ်သမားများအား ဓာတ်မြေသြဇာများ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ မသုံးရန်အားပေးခြင်း။  နေရောင်ခံဆိုလာပြားများအား ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ထွန်းသော အဓိကနေရာများတွင် သုံးစွဲခြင်းကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
41.  အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေအား စစ်ဆေးသော အလုပ်သမားဌာနမှ စစ်ဆေးသူများအတွက် ဝန်ပိလာခြင်း။  ခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အစည်း အားလုပ်ငန်း ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် ဖိအားများလာခြင်း။  EIA လုပ်ငန်းစဉ်အားထိရောက်စွာဆောင်ရွက်ရန် အခြေအနေဖြစ်လာပါက ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအာဏာပိုင်များအတွက် ပိုမိုဝန်ပိလာနိုင်ခြင်း။
42. လုပ်ငန်းများမှအလုပ်သမားများ အပြိုင်အဆိုင်ရှာဖွေခြင်းကြောင့် လစာများမြှင့်တတ်လာ စေပြီး ငွေကြေးဖောင်းဖွမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။ စားသောက်စားရိတ်နှင့်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးနှုန်းပိုမိုမြှင့်တတ်လာခြင်းကြောင့် ဒေသခံများဝယ်သူမသုံးစွဲနိုင်မှုနည်းပါးလာခြင်း။ ဒေသတစ်ခုအတွင်းတွင် ဟိုတယ်များအား ဆက်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူလူထုအတွက် ပုံမှန်သွားလာလည်ပတ်မှုအား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း။ မြေယာများဆက်တိုက်ရယူခြင်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများ၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အတွက် အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောမြေယာများ လျော့နည်းသွားခြင်း။
43.  မြေဈေးများမြှင့်တင်လာမှုကြောင့် ဒေသခံလူထုနှင့် နောင်လာနောင်သားများအတွက် မြေနေရာဝယ်ယူရန်မတတ်နိုင်ခြင်း။  လုပ်စားကိုင်စား မြို့လည်ရပ်ကွက်များသို့ ပို၍အရည်အချင်းပြည့်သူများ၊ လုပ်ငန်းများ လာရောက်ခြင်း - ဥပမာ - မြို့ပြနေလူထုမှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာကြသောကြောင့်ထိုဒေသအတွင်း အိမ်၊ခြံ၊မြေဈေးများ မြင့်တက်လာပြီး ဌားရမ်းနေထိုင်သူများ ဆက်လက်ဌားရမ်း နေထိုင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့သည့်အတွက် အခြားသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရခြင်း။  ခရီးသည်များစုပြုံများပြားလာခြင်းကြောင့် ဒေသ၏ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတန်းအစဉ်လာများ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်နယ်မြေများအား လေးစားသောလိုက်နာမှုမရှိသော ခရီးသွားဧည့်သည်များ အမြောက်အများ ဝင်ရောက်လာခြင်း။
44.  မြေဆီလွှာအတွင်း ညစ်ညမ်းစေသည့်ပစ္စည်းများပါဝင်သည့် အနည်ကျမှုများ တိုးပွားလာမှုကြောင့် လယ်သမားများနှင့် ငါးဖမ်းသမားများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများအား ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်း။  မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြစ်ချောင်း၊အင်းအိုင်များ၊ကမ်းခြေဒေသများတွင် လေထု၊ရေထညစ်ညမ်းများ ပိုမိုများပြားလာခြင်း။  မြစ်အတွင်းသို့ အမှိုက်များစွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့် ရေများ၏အရည်အသွေးများ ကျဆင်းလာစေခြင်း။  ရေသုံးစွဲမှုပမာဏ အလွန်တိုးပွားလာမှုကြောင့် ရေရှားပါးမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်း။  ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများလာခြင်း၊ လမ်းများပိုမိုပျက်စီးခြင်း၊ အသံကျယ်လောင်မှုများနှင့် ဖုံထူထပ်မှုများလာခြင်း။  ငါဖမ်းရရှိမှုနည်းလာခြင်း၊ အမှိုက်များစွန့်ပစ်ခြင်းကြောင့်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၊ ပင်လယ်နှင့် ပင်လယ်ရေနေသတ္တဝါများနေထိုင်မှုအား အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း။
45. ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဦးအစလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများ -  အစိုးရ၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရအလှုရှင်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ နှင့် အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသော (သို့မဟုတ်) ဆောင်ရွက်မည့် တာဝန်ယူမှုရှိသော အဦးအစလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများ။  MCRB ၏ ဝက်(ဘ်)ဆိုက်ပေါ်တွင် အများပိုင်စာတန်း (Public document) အဖြစ်ထားရှိမည်။  ဤချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဦးအစလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများအား စစ်ဆေးရန်၊ ပြင်ဆင်ရန် တောင်းဆိုသည်။ (အကြောင်းအရာ၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ရလဒ်များ)။ အခြားနိုင်ငံများတွင်လုပ်ဆောင်နေသော ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဦးအစ လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများ၏ ဥပမာများ -  အစိုးရ၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရအလှုရှင်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် အဖွဲအစည်း အသင်းအဖွဲ့အများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော လုပ်ငန်းများ၏ဥပမာများ။  ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍမှတာဝန်ယူမှုရှိသော စီပွားရေးအလေ့အထများဆိုင်ရာ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နေသော အဦးအစလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများအားလည်းမျှဝေနိုင်ရန်ခွင့်တောင်ခြင်း။
46.  ခရီးသွားဧည့်သည်များမှ တွေ့မြင်ခဲ့ရသော ကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများအား မေးခွန်း (၆) ခု ဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။  အွန်လိုင်းမှတဆင့် ဤမေးခွန်းလွှာအား ဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်း၊ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် မေးမြန်းခဲ့ခြင်း၊ ဟိုတယ်များတွင် ဖြန့်ဝေထားရှိခြင်း။  တစ်လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ဖူးသော ခရီးသွားဧည့်သည် စုစုပေါင်း (၁၂၄)ဦးမှ ဖြေကြားခြင်း။ (စာရင်းကောက်ယူချက်များကို SWIA နောက်ဆုံး အစီရင်ခံစာရေးသည့် အချိန်ထိ ဆက်လက်၍ အွန်လိုင်းမှ ကောက်ခံသွားပါမည်)  စာသားဖြင့် အကြောင်းအရာအား ပိုမိုရှင်းလင်းနက်နဲစွာရေးသားဖော်ပြသော (qualitative) အဖြေများရရှိနိုင်ရန်အတွက် အဖွင့်မေးခွန်းများလည်းပါရှိပါသည်။
47. ၁။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်ဆိုင်သော (စီမံကိန်းအဆင့်မဟုတ်ပါ)-  ရှာဖွေ တွေ့ရှိချက်များသည် သင့်တင့်လျှောက်ပတ်မှု ရှိပါသလား?  အရေးကြီး အချက်အလက်များ ကျန်ရှိခဲ့ပါသလား?  လွဲမှားသော သုံးသပ်ချက်များ ရှိပါသလား? ၂။ (next slides) အစိုးရ၊ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အခြားသော သက်ဆိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းများအားမည်သည့် အဓိကျသောအကြံဥာဏ်များ ပေးလိုပါသနည်း။  လက်ရှိ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား အဘယ့်ကြောင့် ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သနည်း။  ဤအကြံပြုချက်များအပေါ် မည်သူက အကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုသနည်း။  ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်ကမ်းများအားမည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲသင့်ပါသနည်း။ (နီုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် ကောင်းမွှန်သော အလေ့အထများ ကိုအခြေခံ၍)  ကျွန်ုပ်တို့တွင် မှန်ကန်သော စံနှုန်းများ ရှိနေပါပြီလား။  ခရီးသွား လုပ်ငန်းကဏ္ဍနှင့်ဆက်စပ်၍ အခြားမည်သည့် အဦးအစဖြစ်သော လုပ်ငန်းများ (initiative) များ ရှိပါသလဲ။ ထိုလုပ်ငန်းများအပေါ်မှီ၍ မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါမည်နည်း။
48. 4break-out groups Group 1: Tourism in Ethnic Areas / Culture Group 2: Stakeholder engagement/ land and hotel zones/ destination management Group 3: Environment Group 4: Labour/Sex Tourism/Children In each group: Discuss suggested suggested actions on these specific items and provide critical input Discuss scope for in-country multistakeholder initiatives Provide updates on ongoing processes and initiatives Indicate where your interest lies Report back to plenary
49. Stakeholder engagement and participation in tourism development
50.  To ensure that individuals and communities’ voices are heard during planning of tourism development To ensure relevant information on tourism projects is shared with communities and other (affected) stakeholders To ensure that tourism revenue benefits the Myanmar population, and in particular the communities in tourism destinations To ensure that an effective ESIA process is in place for tourism projects To ensure that social investment programmes are developed in collaboration with communities
51.  Proactively invest time in ongoing and meaningful engagement with communities, workers and other stakeholders involved in tourism development, include where E(S)IAs are required  Ensure that women are consulted and can participate in decision-making processes and have equal access to employment opportunities Develop operational level grievance mechanisms for communities and workers that provide accessible, effective processes to address and resolve concerns related to tourism projects Promote employment for local communities in the tourism sector through education & vocational training programmes accessible for all, assistance & empowerment of SMEs and promotion of local sourcing of goods and services Develop social investment programmes in tourism destinations in collaboration with communities, based on their needs
52.  To ensure protection of land owners and land users whose land is or will be acquired for tourism development To ensure that land acquisition processes (including resettlement) for hotel zones follow international standards To avoid conflicts between communities and businesses over legacy issues related to land acquisition and compensation
53. Conduct Strategic Environmental Assessments of hotel zones in main tourism destinations to assess potential impacts on communities Establish clarity for tourism businesses and communities around process and legal basis for: voluntary and involuntary land acquisition by the government and tourism businesses rules and compensation rates for land, housing, crops, other assets and for access to assets When land is expropriated, compensate for both physical and economic displacement, preferably with alternative land Practice transparency regarding hotel permits, and land concessions, as well as negotiations around land acquisition and compensation Apply international standards for EIA and involuntary acquisition and resettlement until the land law and policy framework is clarified and improved.
54.  Carry out enhanced due diligence, with particular attention to legacy and potential conflict issues  Conduct investigation field visits and react to complaints related to tourism development (land confiscation, inadequate compensation) Provide an access to judicial review for people affected by involuntary land acquisition or inadequate compensation Provide for return of unused land to owners which has been acquired for tourism purposes
55.  To build capacity to assess and address the cumulative impacts of tourism in Myanmar’s main destinations  To ensure appropriate planning of relevant public services ataregional level  To prevent water scarcity and other negative impacts due to tourism development by multiple users
56. •Build the capacity of regional governments to address cumulative social and environmental impacts related to the tourism sector On good resettlement practices •Include responsibilities of Regions and States regarding regional tourism planning in the revision of the Tourism Law •Carry out Strategic Environmental Assessments for hotel zones in key tourism destinations to assess actual and potential impacts at the regional level, which can then inform individual tourism projects •Undertake transparent regional and township level water use and waste management planning related to tourism development
57.  To ensure that tourism development in ethnic minority areas proceeds atapace supported by the majority of ethnic minority stakeholders  To ensure that stakeholders in ethnic minority areas are consulted, and can participate in tourism development  To ensure that ethnic minority areas economically benefit from tourism development
58.  Consult with communities and in their local language regarding tourism development, taking into account appropriate timing of tourism development and needs of communities  Consult also with non-state armed groups  Take active measures to ensure local ethnic minority communities benefit economically from tourism  Raise tourist awareness about, and encourage respect for, Myanmar’s diversity when traveling in ethnic minority areas
59.  To ensure that the Myanmar culture, tradition and religion is respected by foreign tourism businesses and visitors  To ensure that the Myanmar culture, tradition and religion is promoted by the government and local tourism industry  To ensure that the privacy of local communities is respected
60. • Require tourism business to protect cultural heritage according to IFC Performance Standards • Consult and assess whether tourism is welcomed by the local population; respect privacy of local communities • Raise awareness amongst foreign tourism businesses and visitors about culturally appropriate behavior • Promote Myanmar culture, traditions and religion through tourism, e.g. supporting local handicrafts
61.  To address current gaps in the legal framework of environmental controls and bring them in line with international standards  To build corresponding government capacity  To ensure that there isacontractual requirement for environmental compliance by tourism businesses that providesabasis for liability for environmental damage  To ensure that visitors respect the environment
62.  Develop national environmental standards and guidelines for the tourism sector. Until then, use IFC Performance Standards and Environment Health and Safety Guidelines  Develop regional water use and waste management plans in key tourism destinations  Ensure that the Myanmar National Water Framework Directive (MNWFD) being developed by the National Water Resources Committee (NWRC) specifically addresses the tourism sector  Raise awareness amongst tourists regarding environmental practices such as waste disposal
63.  To ensure that forthcoming labour law and practice is in line with the ILO Core Labour Standards  To ensure that international health & safety standards are applied consistently  To protect workers from exploitation in the tourism industry and its supply chain, including temporary & (internal) migrant workers
64.  Apply relevant international standards in the tourism industry in the absence of updated national standards on health & safety o Many Myanmar labour laws are being updated. International standards provideasolid basis for sound worker-management relationships that respect the rights of workers o Given the vulnerability of day labourers, temporary and migrant workers, pay particular attention to the contract conditions for these workers when engaging them directly or through business partners o Promote gender equality Provide training on workers in the tourism sector and supply chain on labour rights and health and safety Support freedom of association and provide an operational level grievance mechanism for workers and their organisations to raise workplace concerns
65.  To prevent Myanmar following in the footsteps of its neighbours of becomingasex tourism destination
66.  Implement laws to protect women and men from sexual exploitation  Raise awareness among tourists about laws relating to prostitution in Myanmar  Include reference to the prohibition of child sex tourism in relevant laws  DevelopaNational Action Plan against Child (Sexual) Exploitation  Raise awareness of police, magistrates, communities, village heads about the illegality of child sex tourism and on how to recognize and act when child sex tourism is discovered  Promote adherence to The Code of Conduct for the protection of children from sexual exploitation in travel and tourism;
67.  To address the exploitation of children linked to the tourism industry and its supply chain  To ensure that tourism business respect and promote children’s rights
68.  Promote the Children’s Rights and Business Principles amongst tourism businesses  Develop business Code of Conduct which includesaclause on prohibition of child labour in accordance with international standards  Collaborate with local and international organizations working on the issue of child labour when child labour is discovered in the tourism supply chain  Raise awareness of tourists about tourism and child exploitation (e.g. orphanage tourism, voluntourism, child begging) and provide do’s and don’ts
69.  Set upatourism industry/CSOs working group to share responsible practices and lessons learnt regarding environmental, social and human rights issues  Enhance regional cooperation on responsible tourism and share best practices and lessons learnt
70.  Chatham House စည်းမျဉ်းနှင့်အညီ ဤဆွေးနွေးပွဲအကျဉ်ချုပ် အား MCRB ဝက်(ဘ်) ဆိုက် တွင် တင်ပါမည်။  အကြံပြုစာများအား နောက်ဆုံးပြန်လည်ပေးရန် (အင်္ဂလိပ် (သို့) ဗမာဘာသာဖြင့်) - အကြောင်းအရာနေရာတွင် Tourism SWIA Consultation Draft Feedback” အမည်ဖြင့်  Thithi.thein@myanmar-responsiblebusiness.org/info.mcrb@gmail.com ထံသို့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၂၆ ရက်နေ့တွင် နောက်ဆုံးထားပေးပို့ပါရန်။  အကယ်၍ လူကြီးမင်း၏ အကြံပြုချက်များအား ဝက်(ဘ်)ဆိုက် ပေါ်တွင် မတင်ပြစေလိုပါက ကြိုတင်၍ အသိပေး စေလိုပါသည်။  ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဦးအစလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများ၊ တာဝန်ယူမှုရှိသောခရီးသွားလုပ်ငန်း အလေ့အထများ ရှိသေးလျှင် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော နေ့ရက်၌ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့စေလိုပါသည်။  ဤစာမူကြမ်းအား ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဆွေးနွေးရန်ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။  မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ သက်ရောက်မှုများအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း - နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအား MCRB ၏ ဝက်(ဘ်)ဆိုက်တွင် ဖြန့်ချိထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ပါသည်။  ပါဝင်ပတ်သက်သူအများ နှင့် ဆွေးနွေးမှု များအား အကြောင်းအရာ၊ အပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။
Order of importance and secularism
PTD Consultative Workshop on Universal Service Strategy, Establishing the Uni...
Tin hoc là mot nghanh khoa ho
Kbdh b4 tin10
PVA Filament by Filaments.ca